Biraha aan xurmada lahayn
Dhismaha Kooxda Shandong Kunda Steel
Xilliga dayrta hore ee quruxda badan, Shandong Kunda Steel Co., Ltd. waxay ku biirisay tababarka horumarinta tayada rubucdan. Shandong Kunda Steel Co., Ltd. waxay leedahay taariikh 7 sano ah. Iyada oo si qoto dheer loo fahmay suuqa birta, waxaan ku siin karnaa iibsadayaasha xirfad iyo hi ...
2020, qiimaha suuqyada birta ee Shiinaha ayaa marka hore hoos u dhici doona ka dibna kor u kici doona, oo leh isbeddello waaweyn iyo kor u kac
Sannadka 2020, qiimaha suuqyada birta ee Shiinaha ayaa marka hore hoos u dhici doona ka dibna kor u kici doona, oo leh isbeddello waaweyn iyo kor u kac. Markay tahay Noofambar 10, 2020, tusaha isku -darka qiimaha birta qaranku wuxuu noqon doonaa 155.5 dhibcood, oo ah koror 7.08% isla muddadaa isla sannadkii hore. Xarunta cuf -is -jiidadka ayaa kacday. Baahida macmiilka ...
Iskaashiga Dhaqaale ee Buuxda ee Gobolka (RCEP)
Tani waa guul u soo hoyatay dhinacyo badan iyo ganacsiga xorta ah. Cudurka faafa wuxuu ku faafay adduunka oo dhan, ganacsiga caalamiga ah iyo maalgashiga ayaa si weyn hoos ugu dhacay, silsiladii sahayda ee silsiladda warshadaha waa la xannibay, iyo caalamiyeyntii dhaqaalaha waxay la kulantay ka hortag hadda ah, iyo hal -dhinac ...
Dadka ka ganacsada birta iyo dadka u dhuun daloola warshadaha ayaa saadaalinaya in suuqa birtu uu sare u kici doono mustaqbalka dhow
Maalinta Qaranka ka dib markii baahida biraha ay xoog badan tahay, suuqa birta ayaa la filayaa inuu sare u kaco mustaqbalka dhow. Sida laga soo xigtay kuwa ka ganacsada birta iyo dadka warshadaha ka shaqeeya. Baarka hadda jira, gariiradda kulul oo duuban. Gariiradda qabow la duubay iyo dhexdhexaad - saxan qaro weyn iyo noocyo kale oo gaar ah oo isbeddello kala duwan ah. Marka la eego sariirta baarka ...
Shiinaha ayaa joojiyay dhimista canshuurta dhoofinta birta
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Reserved Rights. Alaabta Kulul - Khariidadda bogga